Hayada SODWE oo tababar u qabtay dumarka naafada | Dalka Times - News and Politics
Home HEALTH Hayada SODWE oo tababar u qabtay dumarka naafada
Hayada SODWE ayaa soo gabagabeysay tababar lagu baranaye axdiga xaquuquk insaanka aduunka. Tababarkaan ayaa waxaa ka faa’iideeystay 35 qof oo u badnaa dumarka iyo gabdhaha naafada. Tababarkaan ayaa waxaa uu xooga saraye difaaca xaquuqda dumarka iyo gabdhaha naafada
Tababarkan ayaa socday mud sedex maalin oo ay ku qateeyn dadki ka soo qeybgalay cashir muhiim oo qeexaya xeerarka difaaca xaquuqda adanaha iyo ka hortaga dhibatooyinka loogeeysto dumarka iyo gabdha. Tababarkan ayaa ku soo aaday xili ay jirto cabsi iyo dhibato ka dhan ah dumarka iyo gabdhaha.
Tababarkan ayaa waxaa qabtay hayada dumarka naafada oo ah mid ak shaqeeyso awoodsiinta dumarka iyo gabdhaha la nool naafanimada oo ah kuwo si weeyn ugu nugul xad gudbyada xaquuqul aadanaha iyo dhibatoyinka ka dhanka ah dumarka